Ukhonkolo Batching Plant, Mixer Ukhonkolo, Boom Ukhonkolo Pump Truck - Conele Group
3 ukukhiqizwa lezisekelo
Kumila ukukhiqizwa itholakala eNingizimu China, Southwest China naseNyakatho China.Convenient ulwandle kanye wesitimela zokuthutha kuqinisekisa izinzuzo esiphezulu.
imishini 15 izinhlobo
Ukumboza ukhonkolo kuhlangana ukudonsa ngokufakwa futhi imishini kabusha, ukukhetha okuningi ngawe.
isipiliyoni engu-25 '
Umi ngo-1993, elalinikezelwe-R & D, yokuthengisa nangemva-yokuthengisa imishini ukhonkolo.
inkampani 28 legatsha
ezingaphansi ezahlukene ukugxila R & D kanye ukukhiqizwa izingxenye ezahlukene, ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi ingxenye ngayinye ezingeni kwamabhizinisi kanye ngokuzimela lingathengiswa futhi wasinda emakethe.
I ukubuthela inkampani bese ehlakulela amathalenta professional futhi aqoqana ukuthuthukiswa kwesikhathi eside inkampani.
inkonzo ngendlela oyifisayo libonisa amandla obuchwepheshe kanye emakethe yethu acceptance.Almost konke kungenziwa egcizelele ngokuvumelana nezidingo zakho, ihlanganisa izingxenye brand kwangaphakathi eyayikhethwe, umhlobiso zangaphandle, etc.OEM futhi ODM lunikezwe.
Ngaphambi ukuthengisa sizobe ukuncoma imishini efanelekayo ngokusho izidingo iklayenti nezinye izimo ezingokoqobo usebenzisa nako yethu futhi professional knowledge.After ukuthengisa, unjiniyela wethu kungatholakali ukufakwa ukulungisa iphutha nokuqeqeshwa siqu ku-intanethi noma esizeni.
Ukusetha intengo oqondile
Ufuna agents.The uhlelo ejensi isu elikhulu esasihamba babeka wonke world.we'll sizame konke okusemandleni ethu ukuze asekele futhi bavikele izithakazelo intengo agent.lower, izinga ikhasimende imithombo, ukukhangisa khulula embukisweni ukukhuthazwa njll
Self ekhuphuka ngokufakwa boom